Akwụkwọ edemede kacha mma
Prometheus, nke Luis García Montero dere
Jizọs Kraịst meriri ọnwụnwa ekwensu na-enweghị mgbagha iji zọpụta mmadụ. Prometheus mekwara otu ihe ahụ, na-echekwa ntaramahụhụ ga-abịa ma emechaa. The abnegation mere akụkọ ifo na akụkọ ifo. Olileanya anyị nwere ike ịchọta n'ezie n'oge ụfọdụ site n'ụdị dike ahụ mụtara ọtụtụ oge na nke ahụ ...
Na Oge na Mmiri, nke Andri Snaer Magnason dere
Na ọ dị oke mkpa ihu ụzọ ọzọ ibi na mbara ala a, enweghị mgbagha. Ebe anyị gafere ụwa bụ akara akara dị ka ihe nnọchianya dịka ha enweghị isi ma ọ bụrụ na anyị na -ahụ nha anya oge anyị na mbara igwe. Ya mere enweghị isi ma nwee ike ịgbanwe ihe niile. Iswa ga -alanarị anyị na anyị ga -abụ ...
Etu esi dee edemede
Nkebi ahịrịokwu hackneyed "M ga -ede akwụkwọ" na -arụtụ aka n'ọhụụ nke ihe dịrị ndụ dị ka ahụmịhe pụrụ iche. Ihe nke naanị ịgba akaebe na -etinye oji na -acha ọcha ga -eme ka chi nke Olympus maa jijiji. Mgbe ahụ enwere ahịrịokwu ọzọ nke «Kwa ụbọchị m malitere ide ...
Niadela, nke Beatriz Montañez dere
Beatriz Montañez paidara ntị n'olu dị n'ime ahụ nke na -esi mgbe ụfọdụ na -agbanyere mgbada ruo na -eti mkpu n'etiti mkpọtụ na -esi n'èzí apụta. Hụba ama na ebe a onye buru ụzọ hụ onye na -eweta "El Intermedio" na -eche na nzọ ọkachamara ọhụrụ ya agaraghị adị nke ọma mgbe ọ gbapụrụ ...
Ụkwụ: N'ịchọ Ụwa Anyị Ga -ahapụ, nke David Farrier dere
Kedu ka ha ga -esi hụ anyị n'ọdịnihu? N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ọ bụ okwu nke iche n'echiche onye nọ n'afọ iri na ụma site na afọ 3024, ụdị ọ bụla ọ nwere ike ịbụ, n'ihu akwụkwọ ọgụgụ na -agụ banyere mmadụ nke nwere ụwa n'oge anyị na -asụ ude na mbara igwe. Ikekwe onye nọ n'afọ iri na ụma ga -eche na ọ tụrụ ya n'anya ...
Mee gị obi ụtọ, nke Carlos del Amor dere
Ha na -abịa bibie ihe niile na mmemme akwụkwọ. M na -ezo aka na mkpụrụedemede mgbasa ozi nke na -enwe ọchichị dị iche iche n'akwụkwọ a. Site Carme Chaparro ọbụna Monica Carrillo ma ọ bụ Carlos del Amor n'onwe ya (M na-ezere ịkọ okwu ndị ọzọ na-enweghị ike ikwu nke ndị a ma ama, na-agbapụ nke ...
Mmalite nke Ndị Ọzọ, nke Toni Morrison dere
Mgbe ọ bịarutere na ebe mmegharị ahụ, Toni Morrison na -abanye n'echiche dị mfe, nke ndị ọzọ. Echiche nke na -ejedebe ihe ndị dị mkpa dịka ibikọ ọnụ na ụwa jikọtara ọnụ ma ọ bụ mmekọrịta na ọkwa niile n'etiti ọdịbendị dị iche iche. Ọ bụ ihe dị ugbu a, nkwukọrịta n'etiti agbụrụ, agụmakwụkwọ, ...
Sọfụ na ntụgharị uche, nke Sam Bleakley dere
Editorial Siruela nyere anyị akwụkwọ na -egwu mmiri n'ime mmiri mepere emepe, ihe ngosi na -atọ ụtọ n'oké osimiri dị ka oghere n'etiti anụ ahụ na nke mmụọ maka mmadụ ọ bụla dabara na mmiri nke oke osimiri. Ma n'oge a, otu onye nkwusa na -akpọ anyị oku ka anyị bịa ...
Aka ike na -enweghị ndị ọchịchị aka ike, nke David Trueba dere
Mgbe akwụkwọ akụkọ Tierra de Campos gara aga, David Trueba na -ezu ike ma a bịa n'akụkọ ifo iji gosipụta akwụkwọ nwere ebumnuche na mmekọrịta ọha na eze. Ọ bụ maka ichetụ ntakịrị gbasara transcendental, banyere nuances nke dabara n'etiti anthropological na ...
Oghere nke nnwere onwe, nke Juan Pablo Fusi Aizpurúa dere
E nwere oge mgbe nka na ọdịbendị na -ebugharị dịka iwu siri dị. Oké iwe dị elu nke ọtụtụ ndị ọzọ ọchịchị Franco mere. Njikwa okwu niile a ma ama bụ akụkụ nke ngalaba ahụ na mmụọ nke ...
Ebumnuche mara mma, nke Chantal Maillard dere
Njirimara nke obodo ọ bụla, nke ihe onyonyo juputara na akara yana site na ntụnyere ndị nna nna nwere otu oghere, jiri nwayọọ nwayọọ mepee hodgepodge, ma ọ bụrụ na ọ bụghị otu, ya na obodo ndị ọzọ na mpaghara nke mmetụta na -agbasawanye.. Taa…